सलमान खानलाई पाँच वर्षको जेल सजाय दिएपछि……. « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
सलमान खानलाई पाँच वर्षको जेल सजाय दिएपछि…….
चर्चित बलिउङ अभिनेता सलमान खान दुर्लभ कालो हरिणको शिकारमा दोषी ठहर भएका छन् । बिहीबार भारतको जोधपुरस्थित एक अदालतले उक्त घटनामा उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । जोधपुरमा सन् १९९८ सेप्टेम्बर २६ मा अवैधरुपमा कालो हरिणको शिकार गरेको अभियोगमा जोधपुर अदालतमा चलेको मुद्दामा बिहीबार उनी दोषी ठहर भएका हुन् ।
अदालतले उनलाई १० हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको छ । दोषी ठहर भएलगत्तै सलमानलाई पक्राउ गरी बिहीबारै जोधपुरको सेन्ट्रल जेल चलान गरिएको छ । यद्यपि, उनका वकिलले भने उनीमाथि झुटो आरोप लगाइएको भन्दै आपति जनाएका छन् । २० वर्षअघि हिन्दी चलचित्र ‘हम साथ साथ है’को छायाँकनकाक्रममा उनले कालो हरिणको शिकार गरेका थिए ।
सोही चलचित्रको छायाँकनकाक्रममा सलमानसँगै रहेका अभिनेता सैफअली खान, अभिनेत्रीहरु सोनाली बेन्द्रे, तब्बु र नीलमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकामा उनीहरुलाई भने अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ । ५२ वर्षीय अभिनेता सलमानले माथिल्लो अदालतमा यो फैसलाविरुद्ध अपिल भने गर्नसक्नेछन् । यसअघि, सलमानविरुद्ध शिकारको मामिलामा दुईओटा मुद्दा परेकामा अदालतले उनलाई निर्दोष सावित गरेको थियो ।
काभ्रे : काभ्रे जिल्ला मासु उत्पादनमा अत्मनिर्भर छ । जिल्लामा ब्रोईलर कुखुराको उत्पादन धेरै राम्रो
केयुको स्कुल आफ इन्जिनियरिङ विभागमा अनलाईन पठनपाठन
धुलिखेल ८ असारः धुलिखेल स्थित काठमाण्डौ विश्व विद्यालयको स्कुल आफ इन्जिनियरिङ विभागले अनलाईन पठनपाठन सुरु
काभ्रेमा अझै बढाइएन आइसोलेसन वेड
धुलिखेलमा फागुन २० गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको